Leli hlobo kube ngesesibili elishisa kakhulu eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Leli hlobo kube ngesesibili ukushisa kakhulu eSpain
Izolo, uLwesihlanu, Septhemba 22, kuphele isikhathi sehlobo. IState Meteorological Agency, i-Aemet, iveze ukuthi kube ihlobo lesibili elishisa kakhulu eSpain. Selokhu amarekhodi aqala, kuphela u-2003 owethulwa njengehlobo elifudumele ezweni. Isilinganiso samazinga okushisa ezweni bekungu-25ºC. Yize emhlabeni jikelele, njengenjwayelo, idatha yehlukile, izinga lokushisa elijwayelekile kulo nyaka kube ngama-24,7ºC. Lokhu kusho ukuthi isilinganiso besiphakeme ngo-1ºC kunasehlobo langaphambilini phakathi kuka-6 no-1981.
Kumele kubhekwe ukuthi amanani womhlaba ahlukile ngoba angaphansi kwezifunda ezahlukahlukene. Uma kungenjalo, ihlobo elifakwe "ezingeni" nalo lifudumele kakhulu emhlabeni wonke. Sekuze kweqa nezindinganiso zango-2015 nokuphakama kakhulu konyaka ka-2016, into ekujula, okwakulindelekile ukuthi kwenzeke. Ngemuva kokushisa kunehlobo elijwayelekile, lokhu kuwa kwethulwa njengenye efudumele kakhulu.
Ukubuyekezwa kokuthi i-mercury kuma-thermometer isabele kanjani
Kakade ekuqaleni, ku UJuni, waqala njengenyanga efudumele kakhulu kusukela ngo-1965. Ngokushisa okujwayelekile okungu-3ºC ngaphezulu kwesilinganiso sale nyanga kusukela ekuqaleni kwamarekhodi. UJulayi no-Agasti nabo bebefudumele kunokujwayelekile, ngamazinga okushisa ka-0 no-9ºC aphezulu kunesilinganiso, ngokulandelana.
Engxenyeni eseningizimu yezwe, kube namarekhodi okushisa. Amazinga okushisa ashubile esikhumulo sezindiza saseCórdoba ane-46ºC abephakeme kakhulu. I-9ºC esikhumulweni sezindiza iGranada noma i-45ºC efinyelelwe eJaén. Lawa ngamanye amarekhodi, ngaphezu kwamagagasi amakhulu okushisa, lapho omasipala abaningana beqopha amazinga okushisa angaphezu kuka-7ºC izinsuku ezilandelanayo.
Ngaphandle kwalokhu, maqondana nemvula, singakhuluma ngehlobo "elimanzi". Ngemvula emaphakathi kweSpain ye Amalitha angama-79 ngemitha eyisikwele, ingaphezulu ngo-7% kunesilinganiso esivele sikhona.
Siyethemba ukuthi ekwindla kuzoba umswakama ngandlela thile, ngoba kubhalansi yonyaka kunesaka elingaphezu kwesilinganiso, i-12% ngezansi. Futhi amazinga okushisa, okulindeleke ukuthi abe phakathi kuka-0 no-5ºC ngaphezulu kwesilinganiso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Leli hlobo kube ngesesibili ukushisa kakhulu eSpain